ဆန္ဒပြ Archives - Factcrescendo Myanmar
Fact Check: မုဒုံမှာ ဆန္ဒပြရင်းဖမ်းဆီးခံရသူများကို ထားဝယ်က သေဒဏ်ပေးခံရသူများအဖြစ်မျှဝေ
April 6, 2021 April 6, 2021 Zun ZeeLeaveaComment on Fact Check: မုဒုံမှာ ဆန္ဒပြရင်းဖမ်းဆီးခံရသူများကို ထားဝယ်က သေဒဏ်ပေးခံရသူများအဖြစ်မျှဝေ
ကြမ်းပြင်မှာ လူရွယ်အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား ၇ ယောက်ကထိုင်လျက် ရှေ့မှာဖုန်းတစ်လုံးစီချထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ ထားဝယ်မြို့က ဖမ်းဆီးခံထားရပြီး သေဒဏ်ပေးရတဲ့ကလေးတွေလို့ရေးသားပြီး မျှဝေထားရာမှာ ဒီပို့စ်ကို ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူ ထောင်ပေါင်းများစွာက ပြန်လည်မျှဝေလျက်ရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီဓာတ်ပုံဟာ မတ် ၂၇ ရက်က မုဒုံမှာ ဆန္ဒပြသူတွေကို ဖြိုခွဲမှုအပြီး ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ “၁ရက်ပဲကျန်ပါတော့တယ် 😭😭😭 Death Sentence (သေဒဏ်) တဲ့ …. 🤬🤬🤬 အယူခံဝင်ခွင့်မရှိဘဲ 15 ရက်ဘဲ အချိန်ရတယ် သူတို့အသက်ရှင်ဖို့ ကျေးဇူးပြုပြီး ဝိုင်းတင်ပေးကြပါဦး🙏😥 #ထားဝယ်မြို့ မှဖမ်းဆီးခံ ကလေးများအားလုံးကို သေဒဏ်ပေးခြင်းအား လုံးဝ ကန့်ကွက်ပါသည်။ #ပြည်သူများ #WhatsHappeningInMyanmar #SaveMyammar #crd”လို့ရေးသားပြီး “ဗီလိန်”အမည်နဲ့ဖေစ့်ဘွတ် အသုံးပြုသူက ဧပြီ ၃ ရက်မှာ မျှဝေထားရာမှာ […]
Fact Check: မန္တလေးမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဖမ်းဆီးမှုဓာတ်ပုံ ဟောင်းကို ယနေ့အဖြစ်အပျက်အဖြစ်မျှဝေ
April 2, 2021 April 2, 2021 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: မန္တလေးမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဖမ်းဆီးမှုဓာတ်ပုံ ဟောင်းကို ယနေ့အဖြစ်အပျက်အဖြစ်မျှဝေ
ဓာတ်ပုံ ၂ ပုံနှင့်အတူ ဧပြီ ၂ ရက်နေ့က မန္တလေးမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို လည်ပင်းကြိုးကွင်းစွပ်ပြီး ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင် သွားတယ်လို့ ရေးသားထားတဲ့ပို့စ်ကို ဖေ့စ်ဘွတ် အသုံးပြုသူ ထောင်ပေါင်းများစွာ ပြန်လည်မျှဝေနေပါတယ်။ ရဲဝတ်စုံနဲ့အမျိုးသားများက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ဓာတ်ပုံ ၂ ပုံနှင့် အတူမျှဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေကို ပြန်လည်ရှာဖွေကြည့်ရာမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို မန္တလေးမှာဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက် ကတည်းက အင်တာနက်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ “မန်းလေးမှာ ယနေ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကြိုးကွင်းစွပ်ပီးခေါ်သွားတာ 2.04.2021 crd 😭😭😭😭😭 ကူရှယ်ပေးကြပါအုံး”လို့ရေးသားပြီး “K Khing”အမည်နဲ့ဖေစ့်ဘွတ် အသုံးပြုသူက မျှဝေထားရာမှာ ၄ နာရီအတွင်း ပြန်လည်မျှဝေမှု ၈ ထောင်ကျော်ရှိပါတယ်။ […]
Fact Check: ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်က ဆန္ဒပြဓာတ်ပုံတွေကို လက်ရှိအဖြစ်အပျက် အဖြစ်ပြန်လည်မျှဝေ
March 26, 2021 March 26, 2021 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်က ဆန္ဒပြဓာတ်ပုံတွေကို လက်ရှိအဖြစ်အပျက် အဖြစ်ပြန်လည်မျှဝေ
အဖြူရောင်လွှမ်းမိုးသောဝတ်စုံများနဲ့ လူအများအပြားတန်းစီလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံ ၃ ပုံနှင့်တကွ ယနေ့ မတ် ၂၅ ရက်မှာ အင်ဂျင်နီယာတွေ စုပေါင်းဆန္ဒပြပုံအဖြစ်ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုထောင်ပေါင်းများစွာက ပြန်လည်မျှဝေထားပါတယ်။ စစ်တပ်ကအာဏာရယူအပြီးမှာ နိုင်ငံအဝှမ်းမှာနေ့စဉ် ဆန္ဒပြလျက်ရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း မတ် ၂၅ ရက် အင်ဂျင်နီယာ စုပေါင်းသပိတ်စစ်ကြောင်းအဖြစ်ဖော်ပြနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့ကတည်း အင်တာနက်မှာပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ လူမှုကွန်ယက် အသုံးပြုသူတွေကို နားလည်မှုလွဲစေပြီး ပျံ့နှံ့မှုအားကောင်းခဲ့တဲ့ပို့စ်ကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရပါတယ်။ “ယနေ့ ရန်ကုန် (march -25) အင်ဂျင်နီယာ စုပေါင်း အင်အားစစ်ကြောင်း လူပင်လယ်ကြီး ချီတတ်လာကြပြီ ____________________________________ ဝင်ဖတ်ရုံဆို သင်ပဲသိမယ် ပြန်ရှယ်ရင် လူများများသိမယ် အကူအညီပေးရာရောက်မယ် သင့်သဘောပါ #WhatsHappeningInMyanmar #SACTerroristGroup #SupportCDM #SupportCRPH #JusticeForMyanmar #Mar25Coup #GenerationZ #နွေဦး ”လို့ […]
Fact Check: ဖားကန့် မြေပြိုမှုဖြစ်စဉ်က ဓာတ်ပုံကို လှိုင်သာယာမှာ ဆန္ဒပြရင်း ကျဆုံးခဲ့ရသူများအဖြစ်ဖော်ပြ
March 17, 2021 March 17, 2021 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: ဖားကန့် မြေပြိုမှုဖြစ်စဉ်က ဓာတ်ပုံကို လှိုင်သာယာမှာ ဆန္ဒပြရင်း ကျဆုံးခဲ့ရသူများအဖြစ်ဖော်ပြ
အလောင်းတွေတန်းစီထားတဲ့ ဓာတ်ပုံနှင့်အတူ လှိုင်သာယာမှာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတွေလို့ ရေးသားမျှဝေ ထားတဲ့ပို့စ်ကို ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူ ထောင်ပေါင်းများစွာက ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း ပို့စ်ပါ ဓာတ်ပုံတွေဟာ လှိုင်သာယာက အဖြစ်အပျက်နဲ့ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း ဖားကန့် မြေပြိုမှုဖြစ်စဉ်က ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ လှိုင်သာယာမှာ စစ်တပ်က လမ်းပေါ်ရှိနေသူတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြိုခွင်းခဲ့တာကြောင့် မတ် ၁၄ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) တရက်ထဲမှာပဲ အနည်းဆုံး လူ ၅၁ ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ လူမှုကွန်ယက် အသုံးပြုသူတွေအကြား ပျံ့နှံ့မှုအားကောင်းခဲ့တဲ့ လှိုင်သာယာက သူရဲကောင်းတွေ ကျဆုံးပုံအဖြစ် ဖော်ပြထားတဲ့ပို့စ်ကိုအောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရပါတယ်။ “လိူင်သာယာ သူရဲကောင်းတွေ အားလုံးအေးချမ်းတဲ့ ဘုံဘဝမှာ နားခိုနိုင်ကြပါစေ”လို့ ရေးသားပြီး “Khine Zaw”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူကမျှဝေထားရာမှာ ၁ ရက်အတွင်း ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူ ၂ […]
Fact Check: KNU နာမည်သုံးပြီး လက်နက်ကိုင်စုဆောင်းမှုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှားဖြန့်
March 13, 2021 March 13, 2021 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: KNU နာမည်သုံးပြီး လက်နက်ကိုင်စုဆောင်းမှုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှားဖြန့်
ပြည်တွင်းသုံးဖုန်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံသုံးဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့အတူ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)က စစ်သားသစ် စုဆောင်း နေတယ်လို့ ရေးသား မျှဝေထားတဲ့ပို့စ်ကို ဖေ့စ်ဘွတ် အသုံးပြုသူ ထောင်ပေါင်းများစွာ ပြန်လည်မျှဝေနေ တာတွေ့ရပါတယ်။ ပျံ့နှံလျက်ရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံပို့စ်မှာ ကရင်အမျိုးသားအလံကိုင်ဆောင်ထားသော လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ပုံနှင့်အတူ “သင့်အား KNU မှအလိုရှိသည် ထိုင်းနိုင်ငံကရင်အမျိုးသားဆက်ဆံရေးရုံး ရုံးချုပ်တာဝန်ခံဖုန်း။ ။0944710652 0920897951 0827982475 0846517739”လို့ရေးသားထားထားပါတယ်။ “ဝင်ချင်တဲ့သူဆက်သွယ်လိုက်ပါKNU ကြိုဆိုနေပါတယ် Cerdit”လို့ ရေးသားပြီး “Van Duh Thang ”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြူသူက အဆိုပါဓာတ်ပုံနှင့်တကွ မျှဝေထားရာမှာ ပြန်လည်မျှဝေသူ ၉ ထောင်ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အလားတူ မျှဝေထားတာတွေကို ဒီနေရာ၊ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာမှာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ မူရင်းလင်ခ့် – Fb link | Archive link သို့သော်လည်း ဒီသတင်းဟာ မှားယွင်းပြီး […]
Fact Check: ဆန္ဒပြစဉ် သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ မကြယ်စင်ရဲ့ အလောင်းကို စစ်သားတွေက တူးဖော်နေပုံလား-မဟုတ်ပါ
March 12, 2021 March 12, 2021 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: ဆန္ဒပြစဉ် သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ မကြယ်စင်ရဲ့ အလောင်းကို စစ်သားတွေက တူးဖော်နေပုံလား-မဟုတ်ပါ
မန္တလေးမှာ ဆန္ဒပြရင်းပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ မကြယ်စင်ရဲ့ အလောင်းကို စစ်သားတွေက တူးဖော်နေတဲ့အထောက် အထားအဖြစ် စစ်သားတွေမြေကျင်းတူနေဟန်ပုံတွေကို ဖေ့စ်ဘွတ် အသုံးပြုသူ ထောင်ပေါင်းများစွာ ပြန်လည်မျှဝေနေတာတွေ့ရပါတယ်။ မကြယ်စင်အပါအဝင် မတ် ၁၁ ရက်အထိ မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြရင်း သေနတ်ထိမှန် သေဆုံးခဲ့ရသူ ၇၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ မကြယ်စင်ဟာ သူ့မသေခင်ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားချက်တွေနဲ့ သေနတ်နဲ့ အပစ်ခံရအပြီး သေဆုံးခဲ့ရချိန်မှာ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူများအကြား တမုဟုတ်ခြင်း ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် သေဆုံးသူမကြယ်စင်ရုပ်လောင်းကို စစ်တပ်က ပြန်လည်တူးယူခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဓာတ်ပုံတွေဟာ မကြယ်စင်ရဲ့ အလောင်းကို တူးဖော်နေတဲ့ပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ “မကြယ်စင် ရုပ်အလောင်းဖွင့်ဖောက်ခြင်း 5-3-2021(ည)”လို့ ရေးသားပြီး “ပြည်တွင်း ပြည်ပ နေ့စဉ်သတင်းများ နှင့် သုတရသ ဗဟုသုတများ”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာက မျှဝေထားရာမှာ ပြန်လည်မျှဝေသူ ၁ […]
March 11, 2021 March 11, 2021 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: ၂၀၁၅ ခုနှစ်က လက်ပတန်းကျောင်းသားသပိတ်ဖြိုခွင်းမှုပုံကို မြောက်ဉက္ကလာမှာ စစ်တပ်က ဖြိုခွင်းမှုအဖြစ်ဖော်ပြ
လူတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ရိုက်နက်နေပုံ၊ အမျိုးသမီးတွေငိုနေပုံ၊ ရဲတွေရှေ့မှာ လက်နှစ်ဘက်ကို ခေါင်းပေါ်တင်ထားပြီး ခေါင်းငုံ ဒူးကွေးထိုင်နေတဲ့ လူအုပ်ပုံတွေနဲ့အတူ မြောက်ဉက္ကလာပမှာဖြစ်သွားတဲ့ ယနေ့ဖြစ်လို့ ရေးသားမျှ ဝေထားရာ ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူ ထောင်ပေါင်းများစွာ ပြန်လည်မျှဝေထားတာတွေ့ရပါတယ်။ မတ် ၃ ရက်နေ့က ဆန္ဒပြသူတွေကို အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမှုအပြီးမှာ မြောက်ဉက္ကလာပမြို့နယ်မှာ အနည်းဆုံး ၁၀ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပြီး ဒီကနေ့လည်း စစ်တပ်နဲ့ ရဲအဖွဲ့က ဝင်ရောက်ဖြိုခွင်းခဲ့ရာမှာ ဆန္ဒပြသူ အများအပြားအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ “ဆန္ဒပြ ပြည်သူအား စစ်သုံ့ပန်းမျာကဲ့ သို့ ဆက်ဆံတဲ့ မြောက်ဥက္ကလာပုံရိပ်(10.3.21) “လို့ ရေးသားပြီး “U Myint Wai”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူ မျှဝေထားရာမှာ ဒီပို့စ်ကို ၇ နာရီအတွင်းမှာ ပြန်လည်မျှဝေသူ ၅ထောင်ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ မူရင်းလင်ခ့် – Fb link | […]
Fact Check: ၂၀၁၁ ခုနှစ်က ကိုဆိုဗိုမှာ တွေ့ရတဲ့ UN အမှတ်တံဆိပ်ကားကို ရန်ကုန်မှာ ဆန္ဒပြသတင်းရယူနေတဲ့ကားအဖြစ်ဖော်ပြနေ
March 3, 2021 March 3, 2021 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: ၂၀၁၁ ခုနှစ်က ကိုဆိုဗိုမှာ တွေ့ရတဲ့ UN အမှတ်တံဆိပ်ကားကို ရန်ကုန်မှာ ဆန္ဒပြသတင်းရယူနေတဲ့ကားအဖြစ်ဖော်ပြနေ
UN အဖွဲ့က မြေပြင်သတင်းယူနေတဲ့ဆိုပြီး ကားပုံ ဓာတ်ပုံ ၃ ပုံနဲ့အတူ မျှဝေထားရာမှာ ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူ ထောင်ပေါင်းများစွာက ပြန်လည်မျှဝေထားပါတယ်။ သို့သော်လည်း အင်တာနက်မှာ ပျံ့နှံ့ပြီးဖြစ်တဲ့ ဓာတ်ပုံကို ပြုပြင်ဖန်တီးမျှဝေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုကွန်ယက် အသုံးပြုသူတွေကို နားလည်မှုလွဲစေနိုင်ပြီး ပျံ့နှံ့မှုအားကောင်းခဲ့တဲ့ပို့စ်ကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရပါတယ်။ “UN အဖွဲ စမ်းချောင်းရောက်နေပါတယ် ပိုပြီးအင်အားပြကြပါ Crd Mg Mg Tin Nyunt ထူးထူးခြားခြား UN ရုံးကားများ တမြို့လုံးပတ်ပြီး မှတ်တမ်း ယူနေပါပြီ ဆက်တိုက်ဗျိူ့ အရေးတော်ပုံ အောင်မြင်ရန် လက်တကမ်း အလို Fighting ဘရန်ဆိုင်း Thetdwe Aung TZO ”လို့ ရေးသားထားတဲ့ပို့စ်ကို “Thi Ri”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူက မေ ၃ ရက်က […]
Fact Check: အမေရိကန်သံရုံးက အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကို လိုက်ထုတ်ပေးနေ သလား-မဟုတ်ပါ
March 3, 2021 March 3, 2021 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: အမေရိကန်သံရုံးက အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကို လိုက်ထုတ်ပေးနေ သလား-မဟုတ်ပါ
ပိတ်မိနေသူတွေ ဒါမှမဟုတ်လည်း ဖမ်းခံရသူတွေကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံရုံးကလိုက်ထုတ်ပေးနေပြီး အကူအညီတောင်း နိုင်တယ် ရေးသားမျှဝေထားတဲ့ ပို့စ်ကို ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူ ထောင်ပေါင်းများစွာက မျှဝေထားပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီအချက်အလက်ဟာ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူတွေကို နားလည်မှုလွဲစေနိုင်တာတွေ့ပြီး အထောက်အထားမရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ အမေရိကန်သံရုံးဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာက ဓာတ်ပုံနဲ့တကွ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံး(ရန်ကုန်)ရဲ့ လိပ်စာနဲ့အတူ ပိတ်မိနေသူတွေကို လိုက်ထုတ်ပေးနေတယ်လို့ရေးမျှဝေထားတဲ့ ပို့စ်တွေရဲ့ ပျံ့နှံ့မှုကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါတယ်။ “အကယ်လို့ ပိတ်မိနေခဲ့ရင် ပိတ်မိနေတဲ့ သူတွေ US Embassy က လိုက်ထုတ်ပေးပါတယ်။ အကူအညီတောင်းပါ။ 110 University Ave, Kamayut Township, Rangoon, Burma. Phone: (951) 7536509 Fax: (95)-(1)-7511069 Email: [email protected] #Credit ”လို့ ရေးသားထားတဲ့ပို့စ်ကို “May Myat Mon”အမည်နဲ့ […]
Fact Check: မန်ယူကစားသမား ဝိန်းရူးနီးက CDM ပါဝင်ဖို့ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ
February 27, 2021 February 27, 2021 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: မန်ယူကစားသမား ဝိန်းရူးနီးက CDM ပါဝင်ဖို့ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းက ဘောလုံး ကစားသမားဟောင်း ဝိန်းရွန်းနီးဟာ CDM မှာပါဝင်ပြီး အာဏာရှင်ကို တော်လှန်ဖို့ အားပေးနေပုံဆိုပြီးတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူ ထောင်ပေါင်းများစွာ ကမျှဝေထားပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီဓာတ်ပုံဟာ ဓာတ်ပုံပြုပြင်နည်းနဲ့ပြုပြင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မူရင်းဓာတ်ပုံဟာ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပရိတ်သတ် ၁၀ သန်းပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောတဲ့ဓာတ်ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ “မန်ယူ အသင်းကစားသမားဟောင်း ရွန်းနီး တောင်မှ CDM ပါဝင်ဖို့ အာဏာရှင်တွေကို တော်လှန်ဖို့ အားပေးနေပြီ Crd. ”လို့ရေးသားပြီးအောက်ပါအတိုင်းမျှဝေထားပါတယ်။ မူရင်းလင်ခ့် – Fb link | Archive link အချက်အလက်စိစစ်ချက် ဓာတ်ပုံရှာဖွေရေးဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်တဲ့ Tineye မှာပုံရှာနည်းအသုံးပြုပြီးရှာဖွေရာမှာ ဒီပုံဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်(မန်ယူ)အသင်း တိုက်စစ်မှူးဝိန်းရူးနီဟာ သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ပရိတ် ၁၀ သန်းပြည့် အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ […]
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို အောင်နိုင်သွားသည့် တိုင်းရင်းဆေးပင်ဆိုတဲ့ သတင်းမှား “ဒီနေ့ မတ်လ ၁၆ရက် (၂၀၂၀)မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ကူးဆက်ရောဂါပိုး တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့က ကိုဗစ်ရေ... by နေရာမောင်
Fact Check: ဗီယက်နမ်မှာ လက်ဖက်ရည်ထဲမှာ သံပုရာရည်ထည့်သောက်တဲ့အတွက် ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ သေဆုံးသူမရှိဆိုတဲ့ သတင်းမှား ဗီယက်နမ်မှာ လက်ဖက်ရည်နဲ့ သံပုရာရည်သောက်တဲ့အတွက် ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်(ကိုဗစ်-၁၉)ကြောင့် သေဆ... by Zun Zee
Fact Check: လောက်သေရွက်က ကိုဗစ်ကို ကုသနိုင်သလား- လုံလောက်တဲ့ အထောက်အထားမရှိပါ လောက်သေရွက်ကြိုသောက်ရင် ကိုဗစ်-၁၉ ပျောက်တယ်လို့ရေးသားထားတဲ့ ပို့စ်ကို လူမှုကွန်ယက် အသ... by နေရာမောင်
Civitနဲ့ Vitamin-Cအပါအဝင် နွားနို့၊ ကြက်ဥစတဲ့ဖြည့်စွက်အစာတွေက ကိုဗစ်နိုင်တင်းကို သက်သာစေသလား Civiteနဲ့ Vitamin-Cအပါtဝင် နွားနို့၊ ကြက်ဥစတဲ့ လူကိုအာဟာရဖြစ်စေတဲ့ ဖြည့်စွက်အစာတွေက က... by Lynn Yu
ဂျင်းက COVID-19 ကိုကာကွယ်ကုသနိုင်တဲ့ အထောက်အထားမရှိပါ ဂျင်းက COVID-19 ကာကွယ်ကုသနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ပို့စ်တစ်ခု လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူကြားမှာ ပျံ... by နေရာမောင်
အသက်ရှုလေ့ကျင်ခန်းက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှား ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ စာရင်းတွေအရ ဧပြီ ၅ ရက်နေ့အထိ ကမ္ဘာတစ်လွှာမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရ... by နေရာမောင်
Categories Select Category Altered (5) Coronavirus (79) Explainer (3) False (404) False Caption (1) Misleading (91) Missing Context (17) Partly False (3) Social (1) ကူးစက်ရောဂါ (29) ကူးစက်ရောဂါ၊ အစိုးရ (4) ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေ (1) ကျန်းမာရေး၊ (19) ငွေကြေးကဏ္ဏ၊ ဗဟိုဘဏ် (1) စီးပွားရေး (5) ဆန္ဒပြပွဲ (1) ဆေးပညာ (1) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ (40) တိုင်းရင်းသားရေးရာ (1) နက္ခတာရာ၊အာကသသိပ္ပံ (1) နိုင်ငံတကာ၊ (60) နိုင်ငံရေး (230) နိုင်ငံရေး၊ (14) နိုင်ငံရေး၊ တပ်မတော် (1) နိုင်ငံရေးပါတီ (1) ဘာသာရေး (5) မြို့တော်များ (1) မှုခင်း (1) ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား (1) လူမှုရေး (213) လူမှုရေး၊ (23) လူမှုရေး၊ကူးစက်ရောဂါ (2) လူမှုရေးရေး (2) အစိုးရ (3) အနုပညာ (3)
Archives Select Month July 2021 (19) June 2021 (15) May 2021 (21) April 2021 (15) March 2021 (20) February 2021 (19) January 2021 (42) December 2020 (38) November 2020 (42) October 2020 (49) September 2020 (48) August 2020 (35) July 2020 (41) June 2020 (33) May 2020 (34) April 2020 (41) March 2020 (47)